သာလိကာ - ဝီကီပီးဒီးယား
G. religiosa at Satchari National Park]], Habiganj District, Bangladesh
သာလိကာ (Gracula religiosa) ကို လူတိုင်းမမြင်ဖူးကြသည့် တိုင်အောင် လူသိအများဆုံးငှက်များတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ လူပြောသည့်စကားကိုလိုက်၍ ပြောတတ်သောကြောင့် အချို့က သာလိကာကို လှောင်အိမ်တွင်ထည့်၍ ချစ်စနိုး မွေးထားတတ်ကြသည်။ သာလိကာကို သာရကာဟု လည်းခေါ်သည်။ သာလိကာသည် စတာနီဒီး မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍ သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အလိုအားဖြင့် ဂရက်ကူးလားရီလီ ဂျီအိုစား အင်တာမီးဒီးယား ဟုခေါ်သည်။ အလျား ၁ဝ လက်မရှိသည်။ တောင်ပံရှိ အဖြူမှတ်ကလွဲ၍ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အမွှေးများသည် မည်းနက်နေသည်။ တောင်ခြေရှိ သစ်တောများတွင်နေ၍ ပင်မြင့်တွင်ကျက်စားသော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။
သာလိကာများသည် သစ်ပင်ထိပ်ဖျားများတွင် အုပ်ဖွဲ့၍ နေတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးရိုးမကျွန်း တောများ ထဲ၌အနေများသော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းတောထဲ၌ ယင်းတို့၏ ပျော်ရွှင်မြူးတူးကခုန်နေကြ သည်ကိုမြင်ရသည်မှာ ပျော်စရာကောင်းလှပေသည်။ သာလိကာသည် အခြားငှက်များ၏ အသံကိုအတုခိုး၍အော်နိုင်သည့်အပြင် လူတို့သင်ပေးသောစကားကိုလည်းပြောနိုင်သည်။ အထူးခြားဆုံး အချက်မှာ စူးရှသည့်လေချွန်သံကဲ့သို့သော အသံဖြင့်လည်း အော်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သာလိကာတို့သည် ဥများကို ဧပြီလနှင့်မေလအတွင်း များသောအားဖြင့် ဥလေ့ရှိကြသည်။ အသိုက်ဟူ၍ ကျကျနနမလုပ်ပဲမြေကြီးမှ ၁ဝ ပေမှပေ ၃ဝ ခန့်အကွာရှိ သစ်ပင်ပေါ်၌သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသော သစ်ခေါင်းတွင် မြက်၊ သစ်ရွက်များတွင်ခင်း၍ ဥလေ့ရှိသည်။ ဥ ဥစ၌ဥများသည် တောက်ပသောအပြာရင့်ရောင်ရှိပြီးလျှင်ချောကလက်ရောင်နှင့် နီညိုရောင်အပြောက်များ ပါရှိသည်။ သို့သော် မကြာမီ တဖြည်းဖြည်း အရောင်မှိန်သွားတတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် နှစ်ဥမှသုံးဥ အထိ ရှိသည်။
သာလိကာများကို အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတိုင်း၌လိုလိုပင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ခြေရှိသစ်တောများတွင် အနှံ့အပြားနေကြသည်။ သို့သော်မြင့်သော တောင်ပေါ်များ၌ကား ယင်းတို့ကိုအတွေ့ရနည်းသည်။
↑ BirdLife International (2012). "Gracula religiosa". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သာလိကာ&oldid=729311" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။